Lamaody Wedding Fashion
Tsy misy tsiambaratelo fa ny vehivavy dia mety ho tezitra amin'ny fizarana faharoa raha mahita olona manao akanjo mitovy aminy. Ary indray mandeha eo amin'ny fiainana dia manome toky izy ary manaiky ny hanao ny akanjo mitovy amin'ny sipany. Ity "indray mandeha" ity - ny andro fampakaram-bady, rehefa manao akanjon'ireo sipany mitovy endrika amin'ny endrika, ny lokon'olon-koditra amin'ny fofom-bady amin'ny hoavy. Ary amin'ny taona 2015, io fironana io dia eo amin'ny tampon'ny laza.
Ny akanjo mitovy amin'ny fampakaram-bady - aiza no hanombohana azy?
Fomba fijery mitovitovy, ho an'ny ampakarina sy ny sipany - dia porofo mazava fa:
Ny fampakaram-bady dia hatao ao amin'ny fomba iray, ary amin'ny hoavy dia mahafinaritra indrindra ny mandinika ny sarin'ity fankalazana ity;
Tsy ny tovovavy rehetra ihany no ho afaka hijery tsara, fa ny endriky ny ampakarina dia ho vita tanteraka;
Ireo akanjo toy izany dia manondro fa ny fikarakarana ny hetsika dia mihevitra ny antsipiriany kely indrindra.
Hatramin'izao, noho ny antony isan-karazany, dia misy karazany maro ny famoronana sary mampiavaka ny "mpiampanga ny fandresena" sy ny sipany.
Noho izany, afaka misafidy tsy iray ihany ny fomba akanjo, fa koa ny lamba, loko. Mazava ho azy, io safidy io dia mitaky fotoana, faharetana ary asa mafy. Fa ny vokatra dia ho ambony noho ny zavatra andrasana rehetra. Tsara ny manamarika fa amin'ity tranga iray ity, ny safidy azo antoka dia ny fampiasana rehefa mijery chiffon, taffeta, organza na silk.
Aza manapaka ny safidy, raha ny sipany ny ampakarina amin'ny akanjo mitovy, fa ny loko hafa. Ny ankizivavy tsirairay dia omena fahafahana manokana hifidy ny loko misy azy. Tsy voatery hitadidy fa ny palette amin'ny loko iray, fa ny lokony samihafa, dia mbola mijery foana.
Iray amin'ireo safidim-bidy indrindra amin'ny ankapobeny - bridesmaids amin'ny akanjo mitovy, ary akanjo tsirairay no nofidiana ho an'ny tsirairay. Misaotra ny perla, ny fonon-tanana, ny fehezam-boninkazo, ny firavaka ho an'ny volom-borona, ny endriky ny fety ny hatsaran-tarehy rehetra dia ho vita tanteraka sy hifanaraka.
Ny loko tena izy ho an'ny akanjon'ny bridesma tamin'ny taona 2015 dia mavokely ary ny felany, mena, manga. Ilay mpiaro ny fankalazana dia hijery tsara tarehy manoloana ny fiavian'ireo namanao, ary manao akanjo toy izany. Izy ireo dia manasongadina tsara ny fotsy amin'ny akanjo fampakaram-bady ny ampakarina, ny fomba sy ny hatsarany.
Fa ankoatra ny akanjo mamirapiratra, mifanohitra ny akanjon'olon-droa, ny loko dia ahitana ny felana palma - loko maitso, beige, pale pink. Tsy dia miely loatra izany fironana izany, noho izany dia afaka manisa ny zava-misy ianao fa hahafinaritra ny vahiny amin'ny fombany sy ny maha-izy azy.
Wedding manikira amin'ny fantsika fohy
Wedding Dresses tanana
Sberknizhka ho an'ny honeymooners manokana
Lamba fampakaram-bady akanjo lava
Wedding hairstyles ho an'ny volo midadasika miaraka amin'ny sarona
Fampakaram-bady akanjo marika
Ireo aviavy maina - tsara sy ratsy
Mandrobona pears amin'ny lohataona
Alim-bavaka mahazatra - fahavaratra 2014
Ilay tompovavy tsara tarehy
Ireo mpianatra Oxford dia hosaziana noho ny fangatahana ny autograph avy amin'i Emma Watson
Pareo amin'ny akanjo
Bibilava mofomamy tsara na ratsy
Fotoam-pivoriana "Alice in Wonderland"
Ankizivavy mainty misy tavy
Biographie of Erika Herceg
Sand anaty basy - soritr'aretina sy fitsaboana